Fikarohana momba ny firaisana Tovolahy iray indray dia lasa zazavavy, izay mitazona ny hevitry ny lahy: Ny raharaha momba ny fanambadiana gemblinan'i Karunasena | Ruby Silva - Fikarohana momba ny vatana teraka
Notadiavin'ny: Ian Stevenson, MD ary tantaran'i Francis
Ny fiainan'i Karunasena
GG Karunasena dia teraka tamin'ny mars 4, 1952 tao amin'ny tanànan'i Aluthwala, tanàna sri-Lankana. Ny rainy, izay sahy, dia GG Punchi Singho ary ny reniny dia DW Punchi Nona. Mifanohitra amin'ireo teratany maro ao Sri Lanka, samy ray aman-dreny avokoa ireo. Karunasena dia nanana zokiny roa, Dhanasiri sy Upasena. Nanana zandriny lahy antsoina hoe Nandasena izy, izay tena tiany tokoa i Karunasena. Ny anaram-pianakaviana ho an'i Karunasena dia i Kira.
Ny tantsaha dia tantsaha, izay nanana fambolena fambolena hazo sy zana-kokazo. Namboly legioma ihany koa izy ireo tao anaty sombin-tany, izay mety hitarika ny fanoherana amin'ny mpifanolo-bodirindrina momba ny tany izay tokony hamboleny. Ny rain'i Karunasena ihany koa dia nitondra kamiao sy fiarabe fitateram-bola. Tao amin'ny 1957, ny GG Punchi Singho dia nizaka lozam-pifamoivoizana, nodorana nandritra ny roa taona, avy eo dia tafakatra tamin'ny lalana azony nandehandehanana, na dia tamin'ny doka sy ny boka aza.
Tian'i Karunasena ny hadio sy akanjo tsara. Ny fialam-boly nataony dia ny fandihizana, ny amponga ary ny papango manidina. Tena liana tamin'ny Bodista izy.
Fihetseham-po iray nitranga teo amin'ny fiainam-pianakaviana no nitranga rehefa nody tao an-tranony ny tokantrano roa. Nisy bibilava iray novonoina ary nodorana ilay iray hafa.
Nahafinaritra an'i Karunasena ny zaridaina ka voamarika fa hentitra be amin'ny tanin'ny fambolena. Rehefa feno fito taona izy, dia niverina avy niasa tany an-tsaha i Karunasena, nandeha tany amin'ny lava-pianakaviana mba hanasa ny tenany ary avy eo nianjera sy nodorana. Ny iray tamin'ireo rahalahin'i Karunasena dia naka ny vatany ary nihazona azy. Niady hevitra ny fianakaviany raha hitondra an'i Karunesna any amin'ny toeram-pitsaboana, saingy nanapa-kevitra fa maty i Karunesena ary tsy misy antony tokony hisian'ny fitsaboana. Ny fahafatesan'i Karunasena dia nitranga tamin'ny Jolay 18, 1959. Izy dia nalevina teo anelanelan'ny fambolena felam-pianakaviana.
Ruby Silva, ilay teratany kômonielan'i Kurunasena, dia teraka
Ruby Kusuma Silva dia teraka tamin'ny Septambra 12, 1962 tao amin'ny tanànan'i Sri Lankana tao Galle, telo taona teo ho eo taorian'ny nahafatesan'i Karunasena. Ny rainy dia WK Simon Silva ary Somie Nona Jayasekera ny reniny. Tamin'ny fotoana nahaterahan'i Ruby, manan-janaka fito, enina lahy ary ankizivavy iray ny ray aman-dreniny. Ny fianakaviana dia nipetraka tao an-tanànan'i Batapola, izay eo anelanelan'ny tanànan'i Galle sy Colombo. Raha roa taona i Ruby, dia nifindra tany Pollewa ny tanànany izay 1.5 kilometatra na maherin'ny iray kilaometatra avy ao Batapola.
Nanomboka niteny i Ruby fony izy mbola latsaky ny 1 ½ taona ary nanomboka niresaka momba ny fiainana taloha fony izy mbola latsaky ny roa taona. Nilaza izy fa tamin'ny fiainany teo aloha dia "anadahy" izy fa tsy "rahavavy." Nilaza i Rudy fa te ho antsoina hoe "anadahy" na "zanakalahy" izy fa tsy "rahavavy" na "zanakavavy."
Rehefa niresaka momba ny fiainany taloha i Ruby, dia toa tsy nanana vokatra ampy tsara izy hanehoana ny tenany. Indray mandeha, rehefa niezaka ny nitantara izy fa nananihany ny tokantranony niainan'ny fiainam-pianakaviany ny cobras, ary nisy bibilava iray nodorana ary olon-kafa maty, dia nampiasa teny manan-janaka izy. Ny rainy, Simon, dia nilaza fa tsy maintsy nandika ny tenin-janany ho lasa olon-dehibe izy. Rehefa tiany ny hampita fa ny rainy taloha dia mpamily fiara fitateram-bahoaka, dia nahafantatra ilay teny ho an'ny fiara fitateram-bahoaka izy fa tsy ho an'ny mpamily, ka dia nampita izany tamin'ny alàlan'ny fanolanana olona iray mitondra fiara.
Toa tezitra i Rudy fa zazavavy izy ary niteny hoe "nahoana aho no tonga zazavavy?" Nilaza koa izy hoe "lehibe aho" ary nilaza fa afaka manao ny asan'ny olona lehibe iray izy. Rehefa nanontany ny antony nanatonany azy ny reniny, dia namaly i Ruby hoe: "Nokapohin'ny reny hafa aho."
Niteny i Ruby fa maotina tsara ny ray aman-dreniny ary tsy nanan-tsiny sy malemy ny rainy. Nilaza i Rudy fa nipetraka tany amin'ny tanàna antsoina hoe Aluthwala izy ary nanatrika ny Sekoly Alahady tao amin'ny tempoly tao. Nolazain'izy ireo fa tsy ray aman-dreny izy no ray aman-dreniny ankehitriny, araka ny nambarany fa tao Aluthwala ny reniny sy ny rainy.
Raha ny fahafatesany teo aloha dia nilaza i Ruby fa niasa tany amin'ny saha fanosotra izy, nandeha teo am-pandehanana mba hosasana ary avy eo nidona tao anaty lavadrano ary nilatsaka. Nilaza ihany koa izy fa naratra ny tongony tamin'ny fanaovana izany ary nokaravasina, nanondro ny tongony havanana teo ambany lohalika. Nilaza izy fa ny iray tamin'ireo rahalahiny dia niteny hoe: "Avelao izy hiditra any amin'ny hopitaly." Nilaza ilay rahalahy hafa hoe "maty izy". Nilaza izy fa teo ny reniny ary nitomany rehefa maty izy. Ny filazalazana Ruby dia marina momba ny fahafatesan'i Karunasena.
Ruby dia miresaka toy ny hoe mbola miaina ny fiainany taloha izy ary miresaka amin'ny ankehitriny. Ohatra, nanao izao fanambarana izao izy:
"Misy voanio voanio ao an-tranoko"
"Fiara fitaterana eny an-dalana amin'ny tranoko"
"Voaozona ny kamiao sy ny fiaran-dalamby" (ny liona dia teny ampiasaina any Sri Lanka ho an'ny kamiao)
"Raha tsy manana voaniho ianao dia afaka mahazo azy ireo any Aluthwala"
Ireo teny rehetra ireo dia marina ho an'ny fiainan'i Karunasena. Ian Stevenson dia nanamarika fa i Ruby dia niresaka toy ny hoe "nialany" tamin'ny fiainany taloha tao Aluthwala.
Nanamarika i Stevenson fa ny fanamarihana nataon'i Ruby dia matetika no namporisihan'ny olona iray ao amin'ny fianakaviana izay hitarika azy hiteny hoe: "Nanao izany aho taloha." Ohatra, rehefa nahita ny reniny nanapaka legioma izy dia nitatitra fa tamin'ny fiainany taloha dia hifamaly amin'ny fianakaviany ny mpifanolobodirindrina aminy amin'ny fefy manasaraka ny valan-dranon'izy ireo. Nanamarika i Ruby fa ny fiainam-pianakaviany taloha dia tsara lavitra noho ny fianakaviany ankehitriny.
Ruby Mahatsiaro ny anarany taloha sy ny anarana Nick
Nilaza i Ruby fa any am-pianarana dia fantatra amin'ny anarana hoe Karunasena izy, fa any an-trano kosa dia Kira no anarany. Nilaza izy fa manan-drahalahy roa lahy sy zandriny lahy iray. Nanamarika i Ruby fa hiara-mianatra sekoly alahady izy sy ny zokiny lahy. Nilaza izy fa eo an-dàlana mankany amin'ny fiainany taloha dia tonga eo an-tokotanin-tsambo ny olona ary avy eo amin'ny fihaonambe. Ny tranony taloha, hoy izy nitantara, dia natao tanimanga ary nosasana ny rindrina. Ankoatr'izay, nanana voanio maro izy ireo tao amin'ny tranony taloha, izay mifanohitra amin'ny tranony ankehitriny, izay vitsy ny voanio misy azy ireo. Notantarain'i Ruby fa hihanika hazo ny zokiny lahy mba hampidina voanio, izay hokapaina sy hosotroin'izy ireo. Nilaza izy fa ny dadany taloha dia hitondra manga avy amin'ny fivarotana, satria tsy manana hazo manga any an-tranony izy ireo. Nanambara ihany koa i Ruby fa nanana toeram-pambolena fingotra ny fianakaviana, na dia tsy namela azy handeha ho any aza ny reniny taloha. Ireo fanambarana rehetra ireo dia nahitsy tamin'ny fiainan'i Karunasena.
Niteny i Ruby fa tao amin'ny tempolin'i Aluthwala izy dia nahita hazo iray. Niteny i Ruby fa nitsidika an'i Kataragama izy, izay foibem-pivavahana malaza any atsimon'i Sri Lanka. Nambarany mazava tsara fa tao amin'io foibe io dia nisy vahoaka be, hazo boasary ary tempoly. Nolazainy ihany koa fa tany Galle izy sy tany amin'ny tanànan'i Sri Lanka hafa, Dodanduwa. Ireo teny ireo dia marina ho an'ny fiainan'i Karunasena.
Niteny i Ruby fa nanasa ny ampahany masaka tamin'ny milina iray teo am-pantsakana ny neniny. Raha ny tena marina, ny fianakaviana Singho dia nanan-tarehy ary ny iray tamin'ireo sakaizan'i Karunasena dia nanasa ny ampahany tamin'ny milina fanenoman-damba izay nanjary mainty noho ny ronono tamin'ny jiro solitany. Karunasena dia nanampy ity nenitoa ity hanadiovana ity milina ity.
Navoaka ny mombamomba ny fiainan'ny Ruby taloha
Ny renin'i Ruby, Somie, dia nandeha tany Aluthwala tamin'ny Martsa 1966 ary nandeha tany amin'ny Tempolin'i Nandaramaya nanontany raha misy zazalahy nanamboatra ny filazan'i Ruby ny fiainany taloha.
Taorian'ny fanadihadiana sasantsasany, dia nanondro ny fianakaviana Singho i Somie. Nanjary nazava fa nitovy tamin'ny fiainan'i Karunasena ny fahatsiarovan'i Ruby. Noho ny fanadihadiana natao, ny fianakaviana Singho dia nandre momba an'i Ruby sy ny fahatsiarovany niainany taloha. Nitsidika an'i Ruby tao Pollewa izy ireo tamin'ny Aprily 1966. Aluthwala, izay nonenan'ny fianakaviana Singho, dia manodidina ny 14 kilometatra na 8 kilaometatra avy ao Pollewa. Ian Stevenson, MD, dia nanamarika fa ireo fianakaviana roa ireo dia tsy nanana fifandraisana teo aloha na fahalalana nifanaovana talohan'ny nifankahitany.
Ruby dia mamaritra ny fiainany taloha teo amin'ny fianakaviana amin'ny anarany
Tamin'ny Aprily 1966 maro ireo fianakaviana ao amin'ny fianakaviana Singho no nitsidika an'i Ruby ary nahafantatra azy ireo tamin'ny fahitana ary namantatra azy ireo tamin'ny anarany. Anisan'izany ireto:
GG Punchi Singho, rain'i Karunasena: Raha nahita olona iray nivahiny tamin'ny fianakaviany nanatona ny trano i Ruby, dia hoy izy: "Ity no raiko." Nankany aminy i Ruby ka nipetraka teo am-pofoany.
DW Punchi Nona, renin'i Karunasena
Dhanasiri, zokin'i Karunasena
Nandasena, rahalahin'i Karunasena
JG Mary Nona, nenitoan'i Karunasena: Tsy nisy olona tao amin'ny fianakavian'i Silva nahalala hoe iza izy fa rehefa nihaona taminy i Ruby, dia sariaka be i Ruby ary be fitiavana mihitsy aza. Nanontany ny rainy hoe: "Iza izy?" Namaly i Ruby hoe: “nenitoako izany.”
Ny dadatompokon'i Karunasena: Rehefa tonga tao amin'ny trano Silva izy, dia nanontany an'i Ruby hoe "Iza aho?" Namaly izy hoe "Ianao no dadatahako."
Ian Stevenson dia nanamarika fa ireo famantarana ireo dia tena mahavariana tokoa satria ny fianakavian'i Ruby dia tsy nahalala hoe iza ireo olona niaina taloha ireo rehefa tonga tao an-tranony.
Fiainana taloha Phobia
Ruby dia nanana lavaka fantsakana. Tamin'ny taonan'ny 3 ½ dia nandeha tany amin'ny fantsakana izy niaraka tamin'ny olon-dehibe. Nampitandrina ny rahalahiny sy ny olon-kafa izy, momba ny loza mety hianjady amin'ny lavadrano. Ity volkano ity dia nanohy ny 1968 farafaharatsiny, tamin'izany fotoana izany i Ruby dia 6 taona, saingy nanapa-kevitra tamin'ny fotoana naha 8 taona azy.
Ny fitondrantenan'ny lehilahy Ruby
Tahaka ny tranga hafa izay misy fiovana eo amin'ny lahy sy ny vavy, Ruby dia nitazona ny fisainan'ny zaza vao teraka indray, ny an'ny lahy. Mifanohitra amin'izany kosa, ny zokiny vavy dia tsy naneho ny toetran'ny lahy. Anisan'izany ireto:
Faniriana ny hitafy ny akanjon'ilay ankizilahy: Nilaza izy fa nitafy pataloha nandritra ny fiainany teo aloha izy ary nangataka ny nomena pataloha. Raha manao akanjo izy, dia hitafy ny fivalanan-jaza eo ambaniny izy. Ruby koa dia hanao ny akanjon'ireo rahalahy sy andriambavy.
Milalao lalao ho an'ny zazalahy: Tian'i Ruby ny manidina kalalao, milalao marbra, milalao cricket, mitaingina bisikileta anadahiny ary mianika hazo, ary mihanika voanio mihitsy aza raha vao maka ny voankazo. Tadidio fa tian'i Karunasena ny manidina papango.
Ruby tian-kira ary raha te hisarika ny sain'ny olona iray izy, dia hanaitra feo avy any ambadiky ny tendany izy. Karunasena dia nanao feon-kira naneno ihany koa.
Ruby dia mety ho mahery setra ary mandritra ny fanadihadiana miaraka amin'ireo rahalahiny, dia hanongotra azy ireo amin'ny totohondry izy.
Ruby tsy liana tamin'ny fisakafoanana.
Niangavy ny fianakaviany izy mba hiantso rahalahy na zanany, fa tsy anabavy na zanakavavy. Ny renin'i Ruby dia nanondro an'i Ruby ho zanany lahy farafaharatsiny hatramin'ny 1968.
Rehefa nanatrika ny fandevenana ny vehivavy zokiolona i Ruby, dia nilaza tamin-dreniny izy fa rehefa maty i Ruby dia te hiteraka zazalahy izy.
Ian Stevenson dia nanome ny Ruby Draw-a-Person Tests indroa, izay nahazoan'i Ruby safidy malalaka momba ny maha-lahy sy vavy ny olona roa nampianarina azy. Tao 1968, Ruby dia naka lahy roa, izay i Stevenson dia nanazava hoe Ruby manana ny maha-lahy azy. Ao amin'ny 1973, i Stevenson dia nanome azy fanadinana iray hafa momba ny "Draw-a-Person". Tamin'io fotoana io dia nitarika vehivavy iray izy ary avy eo ankizivavy anankiray, izay nanondro fa ny fisian'ilay vehivavy dia nipoitra.
Ny fiainan'ny fiainany taloha: fitoviana eo amin'i Karunasena sy Ruby
Ian Stevenson dia nanasongadina ny karazam-pomba iraisan'ny Ruby sy ny fiainany taloha Karunasena. Anisan'izany ireto:
Samy liana tamin'ny fambolena sy ny fambolena izy ireo. Ian Stevenson dia nanamarika fa nahita maso an'i Ruby izy tamin'ny fampiasana fitaovam-pitaovam-piadiana mahery vaika.
Tian'izy ireo ny nandihy tamin'ny mozika drala. Rehefa nandre mozika i Ruby, dia nasainy ny mpihira mba hihira sy handihy miaraka aminy.
Samy liana tamin'ny fivavahana ny tsirairay ary indrindra ny Bodisma.
Samy tia akanjo tsara ny roa tonta, ary samy tia akanjo ny ankizilahy
Samy nanakorontana izy ireo: Karunasena dia fantatra fa maloto ary hikorontana ara-batana amin'ny ankizilahy hafa. Araka ny voamarik'i Ruby, dia hampiasa ny taolam-paty hamelezana ny rahalahiny izy mandritra ny adihevitra.
Samy tia an'i Nandasena, tanora zandriny indrindra i Karunasena. Raha nitsidika an'i Ruby izy dia hanafina ny bisikiletan'i Nandasena mba tsy ho voatery hijanona ela kokoa. Nandasena dia mitoetra ho 1 hatramin'ny 2 andro miaraka amin'ny fianakaviana Silva.
Fitsipika momba ny fanambadiana teraka tany vaovao: Fahatakarana ny fiainana taloha
Ny fiovan'ny lahy sy ny vavy amin'ny olana eo amin'ny lahy sy ny vavy: Na dia tovovavy aza dia nitazona ny fisainan'ny zazalahy iray i Ruby. Ny tranga mampihetsi-po iray izay niovan'ny lehilahy sy ny vehivavy tamin'ny fiverenan'ny vovoka indray dia azo jerena ao amin'ny pejy manaraka ny homosexualité:
Vehivavy Japoney Malezianina dia lasa fitaovam-pitiavana ary lasa lesbienne
Fiainana taloha Phobia: Nanana tahotra ho an'ny fantsakana ny Ruby noho ny fahafatesany vokatry ny fidirana amin'ny lavadrano.
Fiainana Talenta sy fitondrantena taloha: Ruby dia nahay nilalao lalao nentin'ny tovolahy. Afaka nihanika hazo izy. Afaka mampiasa fitaovana fanenoman-damosina izy amin'ny fahaiza-manaon'ny olon-dehibe.
Fifandraisana vaovao nohavaozina na dia mbola misy ny fanambadiana aza: Nitambatra indray i Ruby tamin'ny fiainany taloha.
Fanahy Masina ao amin'ny Firaisana ara-nofo any am-parany: Notaterin'i Ruby ny zava-nitranga taorian'ny nahafatesan'i Karunasena, toy ny resaka nifanaovan'ny fianakaviana raha hitondra azy any amin'ny hopitaly. Araka izany, ny fanahin'i Karunasena / Ruby dia afaka nandinika hetsika avy tany amin'ny tontolon'ny fanahy.
Loharano: Stevenson, Ian: Fomba tahaka ny karazana gospet, boky II, tranga folo any Sri Lanka, University of Virginia Press, 1977, pejy 163-202